halgan – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
Articles by halgan
August 25, 2019 halgan 0
Hoggaamiyaha Jabhada Dulmidiid Kornayl Caarre ayaa goor-dhow si adag uga Jawaabay hadalkii kasoo yeedhay Taliyaha Ciidamada Milatariga Somaliland Nuux Ismaaciil Taani.
DAAWO VIDEO: ”Waxaanu Bulshada Sanaag ugu baaqaynaa Muuse Biixi wuu tagayaa, waa hubaal ee yaan la kala Tagin”! waxaa sidaa yidhi…
August 24, 2019 halgan 0
Afhayeenka Xisbiga Waddani Barkhad Jaamac Batuun ayaa si kulul uga hadlay Ciidamo ka tirsanaa Somaliland oo maalintii shalay ku biiray Puntland, kuwaasoo fadhigood ahaa magaalada Badhan ee gobolka Sanaag.
XOG XASAASI AH: Wakiilka QM ee Somalia ‘Swan‘ oo shaaca ka qaaday arrin muhiim ah oo uu kala hadlay Madaxweynaha Somaliland intii uu joogay Hargeysa!
August 23, 2019 halgan 0
Ergeyga gaarka ah ee xoghayaha Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, James Swan ayaa golaha amaanka uga warbixiyay safarkii uu bishii hore ku tagay magaalada Hargeysa.
WAR DEG DEG: Xukuumadda Somaliya oo go’aan culus ka Qaadatay labadii Madaxwayne ee maanta lagu doortay Kismaayo! (Maxaa ka socda Villa Somalia)
August 22, 2019 halgan 0
Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa si aan laga fileyn uga hadashay Laba Doorasho oo maanta ka dhacay magaalada Kismaayo, Kuwaasi oo kala ah..
August 21, 2019 halgan 0
Xukuumadda Somaliland oo uu hoggaamiyo Muuse Biixi ayaa markale ka hadashay dagaal shalay degmada Hadaaftinimo ee gobolka Sanaag ku dhexmaray Ciidanka Puntland iyo kuwa Somaliland.
WAR DEG DEG – Ciidamada Somaliland oo Hargeysa ku xiray Fanaanii ka soo qeybgalay Xuska Aas-aaskii PUNTLAND!
August 19, 2019 halgan 0
Ciidamada ammaanka ee Somaliland ayaa xabsi ku yaal magaalada Hargeysa ku xiray mid kamid ah fanaaniintii ka qaybgalay xuskii sanad guurada 21-aad ee aasaaskii dowlad goboleedka Puntland.
WAR DEG DEG: Dil ka dhacay magaalada Hargeysa iyo Ninkii geystay oo ay Ciidamada Somaliland qabteen
August 18, 2019 halgan 0
Taliyaha oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu ka warbixiyay siduu dilkaasi u dhacay iyo siday ugu suuro-gashay ciidamada qabashada gacan ku dhiiglahaasi.
XOG CUSUB: Wararkii ugu dambeeyay mooshinkii la hor geeyay Baarlamanka Somaliland & Xaaladda oo…
August 17, 2019 halgan 0
Wararka ka imaanaya magaalada Hargeysa, ayaa sheegay in Mooshinkii dhowaan ay golaha Wakiilada Somaliland u gudbiyeen qaar kamid xildhibaanada golahaasi …
DAAWO VIDEO: Xildhibaan Jeesow oo Weerar culus ku qaaday Xildhibaanadii Kismaayo Tagay ee Taageeray Axmed Madoobe, dhulkana ku jiiday!
August 15, 2019 halgan 0
Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo mid ka mid ah xildhibaannada Baarlamaanka Soomaaliya, ayaa si kulul u weeraray, dhulkana ku jiiday, Xildhibaano uu kamid yahay Axmed Macalin Fiqi oo kismaayo tagay, kuwaasi oo taageeray madaxweynaha Jubbaland.
DHAGEYSO WAREYSI: Ujeedka Kulankii dalka Sacuudiga ku dhexmaray Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi iyo Wasiirro ka tirsan DF Somaliya!
August 14, 2019 halgan 0
Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya Amb. Axmed Ciise Cawad oo la hadlay laanta afka Soomaaliga ee VOA-da ayaa sharaxaad ka bixiyay kulankii ay dalka Sacuudiga kula yeesheen Madaxweynaha Somaliland…
DHAGEYSO: Xukuumadda Somaliland iyo Dagaalka Ceel-Afweyn dadka ay ku eedaysay iyo khasaarihii oo kordhay
August 13, 2019 halgan 0
Wasiirro ka tirsan Xukuumadda Somaliland oo maanta Warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa sheegay inay korodhay Khasaaraha ka dhashay rasaastii ay kooxo hubeysan ku furtay dad ku sugnaa gudaha deegaanka Ceel-Afwayn.
August 12, 2019 halgan 0
Warar goor-dhow naga soo gaaray deegaanada Ceel-Afweyn ayaa sheegay in uu maanta uu markale dagaal ka qarxay degmada Ceel-Afweyn ee Gobolka Sanaag.
DHAGEYSO: Guddiga Doorashooyinka ee mucaaradka Jubaland oo warkii ugu cuslaa ka soo saaray habraac doorasho
August 10, 2019 halgan 0
Guddigii doorashooyinka Jubbaland ee ay ku dhawaaqeen musharaxiintii kasoo horjeystay guddiga doorashooyinka Jubbaland ee uu magacaabay Madaxweyne Axmed Madoobe, ayaa soo saaray….
XOG HOOSE: Madaxweyne Axmed Madoobe oo isku diyaariyay dagaal ka dhaca Kismaayo iyo Musharraxiinta oo …
August 9, 2019 halgan 0
Madaxweynaha maamulka Jubbaland, Mudane Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa u diyaar-garoobay dagaal culus oo ka dhaca magaalada Kismaayo, haddii ay fursan wayso.
August 8, 2019 halgan 0
Waxaa sii kordhaya khilaafka xagga siyaasadda kuwajahan ee u dhaxeeya dowlad goboleedka Puntland iyo Dawladda Faderaalka ee Soomaaliya.
August 7, 2019 halgan 0
Dawladda Seychelles ayaa Somaliland ku eedeysay inay jabisay heshiiskii uga yaalay maxaabiistii burcad-badeedda ku eedeeysnaa ee todobaadkan Madaxweynaha Somaliland uu cafiska u fidiyey 19 maxbuuus.
WAR CUSUB: Madaxweynaha Somaliland oo dalb layaab leh u diray Boqor Salmaan ka Sacuudi Carabiya (Ogow Sababta)!
August 6, 2019 halgan 0
Madaxweynaha Somaliland, ayaa warqadaasi ku sheegay, in Somaliland tahay dal madax bannaan, isagana ay masuuliyadiisa tahay ilaalinta sharafta iyo qarannimada Somaliland.
August 5, 2019 halgan 0
DHAGEYSO: Iska Hor-imaad Khasaare geystay oo ka dhacay duleedka Laascaanood & Wararkii ugu dambeeyay.
August 4, 2019 halgan 0
Faah-faahin dheeraad ah oo ka soo baxaya iska hor-imaad xooggan oo xalay saqdii dhexe ka dhacay Saldhi ay ku leeyihiin ciidamada Somaliland ee ku sugan gobolka Sool gaar ahaan duleedka magaalada Laascaanood.
Update: Guddoomiyaha gobolka Togdheer oo la weeraray iyo rasaas badan oo …
August 3, 2019 halgan 0
Warar goor-dhow naga soo gaaray gobolka Togdheer ayaa sheegaya in weerar lagu qaaday guddoomiyaha gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi.
DAAWO SAWIRRO: Odayaal dhaqameed ka tagay Muqdisho oo madaxweynaha Somaliland ‘Biixi’ kula kulmay Hargeysa
August 2, 2019 halgan 0
DEG DEG: Madaxweynaha PL oo ku dhawaaqay warkii ugu cuslaa, cadeeyeyna..
Daawo xasaasi:- Meleteriga Sland “Warsangeliga Sanaag inoo joogay 25sano ayay mushaar qaadanayeen tagitaankoodana waa inoo faaiido”.
Daawo muuqaal xasaasi:- Taliye Taani “Caare waa dambiile xukunkiisana waa toogasho meeshii lagu arko”.
FADEEXAD:Sacad Cali Shire oo Wasiirka Ah Wasaarada Arimaha Debada Somaliland Iyo faratoon Oo Magac Uyaal Uga Cararay
DAAWO VIDEO CAJIIB AH: Soodhaweynti Muqdisho Cumar Iyo Abubakar Kulankii RW Khayre Muqdisho Farxad Is Hayn waayey
Daawo:- Sargaal horay uga soo goostay Sland oo si jeesjees ah ula hadlay Biixi “Sanaag hal calan baa sudhan”.
Xalinta Khilaafka udhaxeeya Deni iyo Karaash oo ka bilaawday Garoowe + Dhoobadaareed oo kaalin wayn qaadanaya
DFS oo xabsiga Nisa kasoo saartay Mukhtaar Rooboow “Caawa xaguu joogaa maxaa cusub?”.
Dowlada fadaraalka soomaaliya ayaa Ka soo saartay xaruunta nabad sugida ee habar khadiija Sheekh muqtaar roobow oo mudo kabadan 9-bilood ku xirnaa xaruuntaasi Kadib markii laga Soo xiray xili Doorashadii Konfur Galbeed Magaalada Baydhaba, Caawa […]
Taliyaha ciidamada somaliland oo maanta saxaafada hargeysa kula hadlayey ayaa waa qiray markii ugu horaysay uu ka haldlay ciidamadii iyo saraakiishii hore uga goostay ciidamada somaliland ee soolka gobolka sanaag u joogay inay ku amreen […]
Wararka laga helayo magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in saaka ay halkaasi ciidamo ka dajisay dowladda Federaalka Soomaaliya. Weriyaal ku sugan Dhuusamareeb ayaa sheegay in ciidamo ka tirsan dowladda Federaalka Soomaaliya oo […]